Notions and Emotions
हालसालै प्रकासित रचनाहरू
"आफ्नै एउटा कोठा र पाँच सय": भर्जिनिया वुल्फ
वर्षमा महिलाहरुका बारेमा कतिवटा पुस्तक निस्कन्छन् भन्ने कुरा तपाईंले ख्याल गर्नु भएको छ ? तपाईंलाई केहि थाहा छ ती मध्ये कतिवटा पुस्तकहरु पुरुषद्वारा लेखिएका हुन्छन् ? विभिन्न विदेशी श्रष्टाका साहित्यिक श्रृजनाहरु पढ्ने क्रममा भर्जिनिया वुल्फको ‘आफ्नै एउटा कोठा’ (अ रुम अफ वन्स अन)भन्ने कृति हात लाग्यो । खासमा एक अर्कालाई आफूले पढेका कृतिहरु पढ्ने सल्लाह दिने क्रममा एलिजा बैनीले मलाई यो कृति पढ्ने सल्लाह दिएकी थिइन् । मैले अलि नजिक भएका हरेक स्त्रीलाई र केहि पुरुषलाई प्रिती कौरको ‘मिल्क एण्ड हनी’ पढ्ने सल्लाह दिने गरेको छु । हो त्यही पढि सकेपछि उसले भर्जिनीया वुल्पको कृति पढे नपढेको कुरा सोधेकी थिई ।
अबको सय वर्षमा, मेरो आफ्नै स्थितिलाई हेर्दा मलाई लाग्छ, महिलाहरु एउटा संरक्षित लिंगको रुपमा रहने छैनन् । उनीहरुले पहिले रोक लगाइएका सबै क्रियाकलापहरु गर्नेछन् । सुसारेले कोइला उचाल्ने छिन् । पसले महिलाले इन्जिन चलाउने छिन् । महिला एउटा संरक्षित लिङ्ग हुँदा स्थापित सबै मान्यताहरु हराएर जानेछन् ।
एक शताब्दि अघिकी लेखिकाको कृतिहरू आफैमा इतिहास पनि हो । त्यस बेलाको महिला लेखनको स्तर र उनीहरुले…
खलंगामा हमाला: खलंगामा हमला
मध्यबजार टुँडिखेलमा ४६ वटा शव लस्करै राखिएका थिए ।
एकजना प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सैनिक चारजना, २० प्रहरी, १९ माओवादी र दुई स्थानीय गरी जम्मा ४६ जनाको ज्यान गएको थियो ।
दन्त्य कथाहरु पढ्दापढ्दै पुस्तक संसारमा छिरिएको हो । पुस्तकहरुममा पनि आख्यानात्मक पुस्तकहरु प्राथमिकतामा पर्थे । समाजका विभिन्न आयामहरु आख्यान मार्फत जान्न पाउनु र कल्पनाको संसारमा हराउन पाउनुले आख्यानात्मक कृतिको अम्मली बनाएको थियो । अलि बयस्क हुँदै गएपछि फाट्टफुट्ट गैह्र आख्यानात्मक कृतिहरुमा पनि आँखा पर्न थाल्यो । अचेल गैह्र आख्यानका कृतिहरु नै प्राथमिकतामा पर्न थालेका छन् । सन् २०१८ को पहिला ३ महिनामा पढि भ्याएका २१ पुस्तक मध्ये ११ पुस्तक गैह्र आख्यानात्मक छन् । खलंगामा हमला पनि तिनै गैह्र आख्यानात्मक कृति मध्यको एक बन्यो ।
माओवादी द्वन्द्वका बेलामा हुर्किएको भए पनि द्वन्द्वका धेरै कथाहरु पढ्न नपाएको थकथक छ । सरकारी संचार माध्यमको एकतर्फी पूर्वाग्रहले भरिएका समाचारहरु मात्रै सुनेर हुर्किएको मलाई सकेसम्म निश्पक्ष भएर लेखिएका द्वन्द्वकालीन घटनामा आधारित पुस्तकहरु पढ्ने तिर्सना मोहन मैनालीको माण्ठा डराएको जुगले जगाएको…
गार्इ खाने कथा
नयाँ संविधानमा अप्रत्यासित तरिकाले धर्म निरपेक्षता घुसाइएको कुराको विवाद जारी रहँदे गर्दा ‘गाइको मासु खान पाउनु पर्ने’ भन्ने विवाद सुरु भएको छ । गाइको मासु खान पाउनु पर्छ भन्ने मत राख्नेहरुले यथासक्य तर्क र प्रमाणहरु पेश गरेर गाइको मासु खान नदिएर राज्यले जनताको ‘भान्सामा नियन्त्रण’ गरेको भन्ने जस्ता वाहियात तर्क समेत गर्न भ्याएका छन् । समस्या कहाँनेर पर्छ भने उनीहरुले पेश गरेकै दलीलहरुको सहायता लियो र त्यसलाई सामान्यीकरण ग¥यो भने त हालको व्यवस्था नै उलटपलट हुन्छ । धेरै गैह्र कानुनी कुराहरुले छुट पाउनु पर्ने हो कि भन्ने जस्तो देखिन आउँछ । हालको कानुनी व्यवस्था नै पनि धरापमा पर्छ ।
गौहत्या विरुद्धको कानुन गलत भएको भन्ने तर्क गर्नेले नेपाली समाजका विभिन्न जातजातीका संस्कृतिहरुमा भएको गौमासको कुरालाई त्यसले कुण्ठित गरेको ठान्छन् । पूर्वमा किरात संस्कृति अन्तर्गतको च्याब्रुङ्ग नाचमा बजाइने बाजामा गाइको छाला प्रयोग हुने गर्छ । त्यस्तै किरातीहरुले पुजामा गाइको टाउको प्रयोग गर्ने गरेको र समयक्रमसँगै राँगाको टाउकामा सरेको भन्ने भनाइहरु छ । पश्चिममा पनि भुल र सार्कीहरुले मरेका गाइहरु लैजाने र …
I love reading books and writing. I become relieved when I write about something which touches me!!
याे ब्लग मैले सन् २०१० मा एकजना फेसबुकका मित्रकाे सल्लाह पश्चात बनाएकाे हाे । त्यसयता मैले यसमा अाफूले लेखेका कथा, कविता, गजल, लेख, अादि प्रकाशित गर्दै अाएकाे छु । यहाँहरूकाे साथ र हाैसलाले नै मलार्इ निरन्तर प्रेरणा दिने गरेकाे छ । अागामी दिनमा पनि मेरा रचनाहरू प्रति प्रतिकृया जनाइदिएर, सल्लाह सुझाव प्रदान गरेर र बाटाे विराउँदा गाली गरेर भएपनि मलार्इ सहयाेग गरिरहनु हुनेछ भन्ने अाशा गर्दछु ।
हालसम्म पढिएकाे संख्या
Abroad studies22 Acoustic covers13 Book-review36 Constitution12 Culture30 Development5 Europe18 Far-west Nepal35 Festivals10 GAJALS (गजल)27
Gender discrimination28 Germany20 Journalism4 Language15 Life abroad10 Love51 Madhesh7 Maoist8 Nepal136 Nepali Literature69 Nepali Music16 Politics53 Relationship16 Social Media11 Society94 Song13 Thought8 Travelogue10 Violence against Women19 Women's right30 Work abroad9
माया गरेको पो त लाटी ! (Story)
‘आज बल्ल यो बोकाले पालो पाउने भो’ साथीहरुले उल्याउँदै थिए ।
विवाहको पहिलो रात । त्यसै पनि डर लागेको थियो । ग्रामीण भेगमा जन्मेपनि सहरको रहनसहनले प्रेम विवाह गर्ने निकै ठूलो रहर थियो । जति प्रयास गर्दा पनि सम्बन्धहरु खासै अगाडि बढाउन सकिएन । खाली आफैलाई प्रयोग गरिएको भान मात्रै हुन्थ्यो । अनि एउटा ग्लानी बोधले मनमा डेरा जमाउँथ्यो । पढाइ पनि खासै गर्न सकिएन । जेनतेन मास्टर कटाएर एक निजी बैंक को जागिर सम्म हात लाग्यो । काम मात्रै रातदिन, पैसा पाउने बेलामा उही हो ।
आमाबाबुको निकै करकाप पछि विवाहको लागी राजी भएको थिएँ । केटी उमेरमा ७ वर्ष कान्छी हो । गाउँको उच्च मावि सकेर गाउँकै क्याम्पसमा जनसंख्या शिक्षा पढ्थी । त्यस्तै २०–२१ की हुँदी हो । भरिएको शरीर देखेर नाइ भन्न सकेन । फेरी पढाइमा पनि राम्रै थिइ । एकदमै सोझी अनि घरको कामकाज पनि सबै जानेकी छे भनेर आमालाई मन प¥यो । बाबुलाई ससुराले राम्रै दाइजो पठाउने भन्ने लागेर चित्त बुझ्यो । मेरो विवाहबाट खासै अपेक्षा थिएन । एकपछि अर्को सम्बन्ध विग्रिएपछि प्रेम मेरो बसको कुरा होइन भन्नेमा परिसकेको थिएँ । यो विवाह एक खाले आत्मसमर्पण थियो । म मायामा ह…
ली क्वान यू, देउवा अनि अक्सफर्ड
ली क्वान यूको प्रभाव यति प¥यो कि मैले नेपालबाटै उनको बारेमा टम प्लेटले लेखेको ‘ली क्वान यूसँगको वार्तालाप’ पुस्तक मगाएर पढ्न भ्याए । उनको उदार आर्थिक नितीले सम्भव भएकाे सिंगापुरको प्रगतिको धेरैले आरिस गर्छन् । पश्चिमा जगतले उनलाई नरम तानाशाह भनेर व्याख्या गरेका छन् । अहिले नेपालमा पनि ली क्वान यू को खोजी भइरहेको छ । समस्या कहाँ नेर छ भने नेपाल भनेको सिंगापुर होइन ।
ली क्वान यूलाई टम प्लेटले (पुस्तक चर्चा यहाँ हेर्नुहाेस्)भारतमा पनि सिंगापुरको जस्तै रुपान्तरण सम्भव छ वा छैन भनेर सोधेका थिए । उनले भातरको विविधतालाई तेस्र्याउँदै भारतको हकमा सिंगापुरको जस्तो परिवर्तन गर्न आफूले सक्दैन थिए । ब्रिक्स देशहरुमध्यबाट भारत र चाइनाको बारम्बार तुलना हुने गर्छ । त्यसमा भारतलाई चाइनाले सजिलै पछार्न सक्ने अनुमानहरु छन् । त्यसको कारण के भने भारत विभिन्न जातजाती, भाषा, र संस्कृतिमा विभक्त छ । तर चाइनामा एक हौँ भन्ने भावना छ । त्यसैले भारतमा सबैको चित्त बुझाउन जति गाह्रो छ चाइनामा त्यस्तो छैन । नेपाको हकमा पनि भारतको जस्तै सांस्कृतिक विविधता छ र सिंगापुरको जस्तो सामुद्रिक पहुँच पनि नेपालसँग छैन । सा…
Sometimes it's hard to hide the way you feel. You confess thinking that you are making things easier but they become more complicated. And then you speak what you never thought you would ever speak:alie. Whenatruth is no more likeatruth andalie seems better convincing, you choose to tellalie and walk away. Whenalie seems true and the truth seemsalie, there is no much difference in tellingalie oratruth.
They both met onaFacebook page: Music That Turns Me On. Well it wasaco-incident that both posted same song in that page one after another. They happened to go through each other's posts. They liked each other's post. The boy started commenting as usual and the girl couldn't stop herself from replying.
"I listen dis song evryda b4 i go2bed :)"
"really? u mustbkiddin right?"
"y wud i"
"just like dat"
"think our likes r same"
It just takes …
नखुलेको आकाश खुलेर आयोः कञ्चन रेग्मी प्रकरणका भित्री कुरा
‘नखुलेको आकाश खुलेर आयो
ऊ सायद यो बाटो भुलेर आयो
झ¥यो त के भो जाही र जुही
त्यो पलास मनमा फुलेर आयो’
बिबिसीमा लामो समय काम गरेका सुमन खरेलको कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारित हुने कार्यक्रम ‘सुमन सँग’मा कञ्चन रेग्मीले यी पंक्तिहरु सुनाउँदा एकदमै भावुक बनेको थिएँ । उनले पति र छोरा इन्जीनीयर हुँदाहुँदै पनि आफूलाई हेलाँ गरेको र सात वर्ष सम्म पिडामा बाँचेको, चिताको आगो तापेर हिँउद काटेको, आदि कुरा भनिरहँदा मान्छेहरु सन्तान पाउनाको सास्ती अनि हुर्काउनका लागी गरिने अनेक दुःख कष्ट किन गर्छन होला जस्तै लाग्यो । त्यसको साटो वृद्धावस्थाको व्यवस्थापनका लागी केहि जोरजाम गरे जीवन कति सहज हुन्थ्यो होला भन्ने पनि लाग्यो । आँखिर न पति न छोरा, कोही त आफ्नो हुँदो रहेनछ ।
कञ्चन रेग्मीलाई फोहरको थुप्रोबाट उद्धार गरेर पवित्र सेवा समाजमा लगी आश्रय दिइरहेकी भनिएकी दिक्षा चापागाईंको नाम धेरै सुनेको अनि एक पटक प्रत्यक्ष भेट भएकी व्यक्ति थिइन् । लाजिम्पाट स्थित सनराइज बोर्डिङ्ग स्कुलमा पढाउने क्रममा त्यहाँकी पूर्व प्रधानाध्यापिका सुजला कार्कीको स्मृतिमा आयोजना गरिने कार्यक्रममा उनको वालाश्रममा भएका वाल–वालिका…
Bro-Sis Band: China Company (Guitar Tutorial)
Nabole Ni Maya Lagne Rai Chha Sanaani
Dilko Kasam Dilaima Natra Jyan Jane
Chaina Kampani,Chaina Kampami
Maya Vaye Samfarai Chadhi Jau
Bachaisang Navaye Mari Jau
Mero Maya Vandama Kasto Chha,
Gitti Ani Baluwa Jasto Chha,
Chaina Kampani,Chaina Kampami Yeyeya
Bato Ramro Chhewaiko Dhalale
Maya Lako Haina Chhal…
नगरकोटी सायद एकमात्र त्यस्ता लेखक हुन् जोसँग उनको कृतिको बारेमा प्रत्यक्ष छलफल गर्न पाएको छु । त्यसबेला उनको कृति पढेको थिएन । मोक्षान्तः काठमाडौँ फिवरको प्रकाशन पश्चातको छलफलको कार्यक्रममा बुकाहोलिक्सको बैठकमा उनीसँग भेट भएको थियो । उनक...
नयनराज पाण्डे र नगरकोटिका भए जतिका किताब अनि आफूलाई मन परेको कुनै एक पुस्तक दिनुहोला भनेर मनोज दाइलाई भनेको थिएँ । उनले अक्षरगन्ज, फोसिल र सल्लीपिर सँगै खबुज पनि बोकेर ल्याए । अरु भन्दा निकै सानो र अनौठो शीर्षक भएको खबुज मैले सबै भन्दा प...
थेल्माः तिमीलाई मृत्यु कस्तो हुन्छ भन्ने नै थाहा छैन । त्यो पुरै अशान्त पनि हुन सक्छ । मृत्यु विहानी पखको घडिको अलार्म जस्तो र तिमी उठेर बन्द गर्नका लागी बिउझनै नसक्ने अवस्था जस्तो भयो भने के गर्छौ ? कहिल्यै बन्द गर्न नसक्ने भयो भने के...
Raman Paneru's favorite books »
Raman has read 11 books toward his goal of 40 books.